Anyị nwalere Honor 4X | Gam akporosis
Sọpụrụ na-eme nkụkpọ na mba anyị. Ngwaọrụ Huawei dị na ahịa Europe nwere usoro ọla dị iche iche dị na ọnụahịa ha enweghị mgbagha maka ego. Na Honor 4X agaghị abụ ihe ọzọ.
Ugbua n'oge ahụ anyị nyochaa Honor 3C, ngwaọrụ nwere oke uru zuru oke maka onye ọrụ ọ bụla na ọnụahịa ya gbanwere mere ka ọnụ ọgụgụ a bụrụ nhọrọ ịtụle. Ugbu a anyị ewetara gị otu zuru ezu Nkwanye ugwu 4X, ebe anyi n’egosiputa ihe nzuzo nile nke phablet na ego di iche: 199 euro
1 Sọpụrụ 4X, ọ ga-agwụcha nke ọma n'agbanyeghị ịbụ ekwentị dị n'etiti
3 Sọpụrụ nzọ na azịza nke ya iji mee 4X iti
4 Ka m nọrọọ na -ekwentị n'ekwentị kwa ụbọchị
5 Igwefoto dị ike
6 Sọpụrụ 4X ọnụahịa na nnweta
7 Mkpebi nke Editor
Sọpụrụ 4X, ọ ga-agwụcha nke ọma n'agbanyeghị ịbụ ekwentị dị n'etiti
N'agbanyeghị na ya gbanwee price, na Nkwanye ùgwù 4X karịrị ezi. Na nha nke 152.9 x 77.2 x 8.7 mm o doro anya na, n'agbanyeghị ịbụ a phablet na a 5.5-anụ ọhịa ihuenyo, ọnụ bụ nnọọ kemaneeji.
Mụ onwe m na-enwe mmasị na ekwentị ndị dị arọ, yabụ nke ha 170 grams ha anaghị enye m nsogbu. N'ezie, ndị ọrụ ahụ na-ahọrọ ọnụ ala dị fechaa ga-achọpụta na Honor 4X dị arọ karịa ekwentị nkịtị. Ihe kwere nghọta atụle ya size na na ọ bụ a ufọt ufọt nso ọnụ.
Akụkụ aka ekpe nke ọnụ ahụ dị ọcha kpamkpam, ma n'akụkụ aka nri anyị ga-ahụ Igodo njikwa akara na bọtịnụ ike site na ọnụ. N'elu bụ mmepụta jaak, ebe n'akụkụ ala anyị ga-enwe njikọ USB micro na ọkà okwu stereo nke phablet Asia ọhụrụ.
Ọtụtụ ndị nrụpụta na-emehie na nke a ma ana m atụ ụjọ na Honor 4X abụghị otu. Ọnọdụ ọkà okwu bụ nsogbu n'ihi na mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-ekpori ndụ ọdịnaya nke ọdịnaya anyị nwere ike n’amaghị ama tinye nkwụnye okwu okwu budata mbenata ụda nke ekwentị.
Nsogbu anyị ahụlarị na ekwentị ndị ọzọ dịka Mi2 na nke ahụ nwere ike ịbụ ezigbo iwe. More ma ọ bụrụ na anyị na-echebara na ndị a na ụdị ọnụ na-gbakwasara na-enwe multimedia ọdịnaya. Nsogbu nke edozi ya site na iji ekweisi, ma ndudue niile na niile.
Na ala ihuenyo ahụ atọ mkpọchi aka. N'ebe a, anyị bịara na njehie imewe nke abụọ: bọtịnụ adịghị agba ọkụ, yabụ na gburugburu ọkụ na-adịghị mma, ị ga-ahụ onwe gị ka ịpị bọtịnụ ruo mgbe ịchọta igodo ziri ezi. N'ezie, nwee obi ike na ụbọchị ole na ole ị ga - ama ebe mkpọchi aka dị.
Emechara Honor 4X karịrị nke ziri ezi, agbanyeghị na ọ bụ plastik. Ma ọ bụ na ya polycarbonate azụ casing nwere ezigbo mma kwuchara na udidi ya na-eme ka ọ dị ezigbo ụtọ imetụ akaE wezụga nke ahụ, ọ na-esiri ya ike iwepụ n'aka gị, ihe m nwere ekele maka njedebe nke nha a.
Mgbe wepu ọnụ mkpuchi anyị na-ahụ mbughari batrị, na oghere 4G kaadị SIM abụọ na nkwado maka kaadị micro SD, dị mkpa na ọnụ a, ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
N'ikpeazụ, efere ígwè nke na-achọ igwefoto na bọtịnụ ike na-enye ya mmetụ mmetụ na-adọrọ mmasị. Na nkenke, na-eburu n'uche ndị na-ege ntị na-eche ya, enwere m ike ịsị na ewulitere Honor 4X n'agbanyeghị obere nsogbu nke ọkà okwu: ọnụ ya na-atọ ụtọ imetụ aka, nwere nhazi mara mma na bọtịnụ ya na-enye mmetụta nke ịdị mma.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa na phablet bụ ngebichi ya. Na ebe a, Honor 4X adịghị ada mbà. Iji malite, ndị otu a rụzuru nke ahụ ihuenyo nwere 75% nke akụkụ ihu, mbenata nha nke ngwaọrụ.
Mkpebi ya ruru pikselụ 1280 x 720, na-enye njupụta nke 267ppp, dịtụ mkpụmkpụ maka ọnụ ya na ihuenyo nke nha a. Mana echegbula, ihuenyo ahụ dị ezigbo mma; ọ dịghị oge ị na-achọpụta ọnụnọ nke pikselụ na agba anya ezigbo nkọ. Na mgbakwunye, Honor 4X ga- na-enye gị ohere ịtọ ọnọdụ okpomọkụ, awade a ihuenyo mma karịa ezuru ọ bụla ọrụ.
Banyere nlele, Huawei ọhụrụ phablet awade a pụtara dịgasị iche iche, na-enye gị ohere ụtọ ọ bụla ọdịnaya site ọ bụla n'akuku enweghị nsogbu. Rịba ama na phablet na-akpa àgwà nke ọma na gburugburu ebe obibi. Ejiri m ya na ụbọchị anwụ na-acha n'enweghị nsogbu.
Enwere isiokwu m na-enweghị mmasị na ya nke ukwuu na na achọtala m na njedebe ndị ọzọ nke nsọpụrụ Honor. Na Honor 4X anaghị agwakọta ihe nchekwa Gorilla Glass Na, n'agbanyeghị na ọ na-abịa na onye nchebe ya, a na-atụ aro ya ka ọ zụta ihe nchebe ihuenyo, ma ọ bụrụ na ejiri iko nwere obi ụtọ mee ya, ọ ka mma.
Mgbe izu abụọ nke ojiji, ọnụ ahụhụ a obere ọkọ na ihuenyo. Ọ bụ eziokwu na amachaghị nke ọma, ma adị m ntakịrị ike ma jiri ekwentị na igodo ekwentị ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'akpa m, kpachara anya karịa izipu ekwentị maka idozi.
Sọpụrụ nzọ na azịza nke ya iji mee 4X iti
The Honor 4X gbagwojuru ekele a HiSilicon Kirin 620 SoC, onye isi nhazi asatọ nwere ike iru ọsọ ọsọ nke 1.2 GHz. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbawa kachasị ike n'ahịa, ọ na-enye ihe karịrị arụmọrụ zuru oke, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla na-enweghị nsogbu, n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ọhụrụ N'agbanyeghị, ekele ya Mali 450 GPU.
Na mgbakwunye, ebe nchekwa 2 GB nke RAM na-enye ohere Sọpụrụ 4X na-agba ọsọ nke ọma. N'akụkụ a anyị nwere ike ikwenye na ọ na-enye arụmọrụ karịa arụmọrụ. Nsogbu a sitere na ngwanrọ ya, nke na-ebuwanye ibu na ahụmịhe onye ọrụ.
Ọ bụ ezie na Android 4.4 KitKat bụ nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ Google arụnyere na Honor 4X, oyi akwa UI mmetụta uche na-eme ka ojiji nke ọnụ ntakịrị njọ. Ọ bụghị nsogbu a na-ahụ anya n'oge eji eme ihe, mana mgbe ọ na-erite uru nke ịba ụba ọ na-abụ nsogbu.
Otu n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ nke phablet bụ ohere iji ohere nke ihuenyo ya na eziokwu ahụ bụ na ịba ụba na-enye ihe kachasị nke ngwa anọ na ihuenyo ahụ, kama nke menu menu ndị a na-ahụkarị, na-egbochi ohere nke atụmatụ a. ...
E nwere oge Ọ dịkwuo mfe iji gaa na menu mbụ wee chọọ ngwa anyị chọrọ iji karịa iji uru nke ịba ụba. Ahụhụ na-akpasu iwe anyị nwere olileanya na ha ga-edozi na mmelite n'ọdịnihu.
Na nloghachi, anyị na-ahụ interface interface zuru oke nke na-enye gị ohere ịhazi ọtụtụ nhọrọ na ekwentị gị, na-ahazi ọdịdị ya n'ụzọ na-atọ ụtọ.
Ihe ozo achoghi m nma na ya Sọpụrụ 4X esịtidem ebe nchekwa; N'agbanyeghị na anyị nwere 8 GB nke nchekwa dị n'ime, anyị nwere 4 GB. A obere oge. Ọ bụ iwu na ị ga-eji kaadi micro SD, nke kachasị bụ 32 GB, iji nweta ohere nke ekwentị a. Mgbaghara a na-apụghị ịgbagha agbaghara na-atụle ọnụahịa ya, mana ọdịda mechara daa.
Ka m nọrọọ na -ekwentị n'ekwentị kwa ụbọchị
Autonomy bụ otu n'ime ike nke Honor 4X, enweghị obi abụọ. Ọ bụkwa yaBatrị mAh 3.000 nke Huawei phablet nwere ike ijikwa jog kwa ụbọchị na enweghị nsogbu. N'inye ya ihe eji ya eme ihe, ejiriwo m ụbọchị abụọ na-enweghị ịde batrị, na mgbe ụbọchị nke ịta ahụhụ mgbe niile, na-anwale egwuregwu yana ndị Spotify na-egwu egwu na-enweghị nkwụsị, ọ tachiri ụbọchị zuru ezu. Can nwere ike ịhụ na nsọpụrụ etinyewo nnukwu mgbalị n'akụkụ a, ndị ọzọ na-emepụta nnukwu ihe nwere ike ịmụta ...
Igwefoto dị ike
Nke a bụ akụkụ ọzọ nke Honor phablet pụtara ìhè. Na Igwefoto isi 4X bụ Honor bụ akara ikike akwadoro maka 214 megapixel dị ike nke Sony Exmor RS IMX13.. Otu oghere nke na-enye arụmọrụ dị egwu. Nnwale ndị anyị gbabara enweghị ike ịbụ ihe na-enye afọ ojuju, na-egosipụta ngwa ngwa ngwa ahụ.
Na oghere f / 2.0 gbaa bụ n'ezie nkọ na zuru ezu, nwere obere ekele maka nhazi nhazi post nke ihe oyiyi. Anyị nwekwara ike ịhazi ọnụ ọgụgụ dị mma nke oke dịka iche, nchapụta, saturation, ISO ma ọ bụ nguzo ọcha.
N'ehihie ehihie na-enye a nnukwu mma na ọkwa zuru oke. N'ime ụlọ ma ọ bụ gburugburu ọkụ adịghị mma, mkpọtụ na-atụ ụjọ apụtaworị, ihe ezi uche dị na ekwentị mkpanaaka. Mana ihe doro anya bụ na igwefoto Honor 4X dị elu karịa nke ndị na-asọmpi ya.
Su 5 megapixel n'ihu igwefoto na-enye ihe karịrị ịrụ ọrụ zuru oke na-enye ohere ịkpọ oku vidiyo ma ọ bụ eserese onwe onye karịa karịa mma. Enweghị ihe ịkatọ na nke a.
Sọpụrụ 4X ọnụahịa na nnweta
The Honor 4X dị ugbu a na Spain na a aro ego nke 199 euro. Nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dịka Amazon ma ọ bụ Redcoon. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala nke na-enye ezigbo arụmọrụ, egbula oge: Sọpụrụ 4X bụ azịza ya. N'ezie, cheta ịzụta kaadị 16-32 GB na ezigbo ihe nchebe ihuenyo.
Igwefoto kachasị na Honor 4X bụ otu kachasị mma na ahịa
Ya batrị dịruru ụbọchị abụọ na-enweghị nsogbu mgbe ot ojiji
Akwa ihuenyo dị elu n'agbanyeghị ọnụ ala ya
Ọnọdụ nke ọkà okwu pụtara na ị nwere ike itinye ya na ndudue mgbe ị na-ele vidio ma ọ bụ na-egwu egwuregwu
Ebe nchekwa dị oke oke, ọ dị mkpa ịnweta kaadi SD micro
Nhọrọ multitasking nke interface Emotion UI 3.0 na-agwụ ike ma na-abaghị uru
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Sọpụrụ 4X, nyocha nke ọhụụ ọhụrụ Huawei
Aghọtaghị m otu ị si ehichapụ okwu na-adịghị mma ozugbo ụlọ ọrụ a enweghị ọrụ aka ọrụ
Zaghachi antonio ceron
Lee enyi m gbaghara m maka ịgwa gị na ọ bụghị omenala ihichapụ okwu ọjọọ ọ bụla. Naanị ndị nwere mkparị ma ọ bụ okwu na-ada ụda na-ehichapụ.
Ndo ọ bụ na ọ bụghị ebe a mana ọ bụrụ na m ga - emesi gị obi ike na mhichapụla okwu na-enweghị iwe onye ọ bụla, gwa m eziokwu banyere nke m na-ajụ Huawei ma ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu na ọrụ teknụzụ abaghị uru na enweghị ike m nwere ike inye gị niile ihe akaebe na enwere m karịa 40 ụbọchị na-akpọ 902 ma na-ede ozi ịntanetị na taa na-eche ọnụ
Ọfọn, 44 ụbọchị na-eche m Huawei nsọpụrụ 4x na ọ dịghị ihe ọ bụla bụ ezigbo Chinese ekwentị obere nkwa karịa agbata obi Chinese ụlọ ahịa
Achọrọ m enyemaka onye nwere ike ịgwa m otu m ga-esi kọọ ụlọ ọrụ a nke rere m ekwentị mkpanaaka nke anaghị arụ ọrụ site na ụbọchị mbụ ma edozighị m ya maka ụbọchị 47 ma na-azaghị m, m ga-enwe ekele maka onye ọ bụla nwere ike ịdụ m ọdụ , Daalụ
Ndewo, enwere m ụdị Colombia nke G735 (nke bụ otu ekwentị), enwere m ike ịsị na igwefoto dị mma, mana otu kachasị mma n'ahịa? O doro anya na ọ bụghị, mana ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ekwentị kachasị mma.
N'ihe banyere onye na-ekwu ya, ọ dị m ka ọ nwere ezigbo ike (karịa karịa obere mbipute) ọ dịkwa m ka ọ nwere ọnọdụ ka mma. Ihuenyo ya dị mma ma ọ masịrị m na agba agba, akụkụ nlele ya dị mma, naanị site n'akụkụ mara mma ọ na-efunahụ obere mma. Batrị ya dị oke njọ ikwu okwu, m ga-anwa anwa ikwu na ọ dị ogologo karịa G2 site na lG nke n'oge ahụ bụ otu n'ime ihe kacha mma. Point megide ya a bit arọ customization oyi akwa ma o sina ọ na-arụ ọrụ nke ọma ekele ya nwere ihe abụọ gigs nke ebule. Banyere iji ọtụtụ rụọ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe na ọ bụ naanị ngwa 4 ka a na-ahụ anya, mana enwere ike ịnweta ngwa karịa site na ịmegharị otu akụkụ iji gosi ndị ọzọ.